Rapti Samachar Weekly | Author Archives
Entries posted by chandrastha
रोल्पाको जलजला जसको इतिहास लामो छ
संसारमा प्रत्येक १० जनामा १ जना मानिस पहाडमा बसोबास गर्दछ । पहाडको स्रोतबाट नै संसारका आधाभन्दा बढि जनसंख्याले पानीको स्रोत प्रयोग गरेका हुन्छन् । संसारमा भएका पहाडमध्ये एशिया महादेशमा मात्र ५४ प्रतिषत भू–भाग रहेको छ । बाँकी उत्तर अमेरिका ३६प्रतिषत दक्षिण अमेरिका २२ प्रतिषत युरोप २५ प्रतिषत अष्ट्रेलिया १७ प्रतिषत र अफ्रिकी मुलुकमा ३ प्रतिषत मात्र पृथ्वीको भू–भाग […]
February 17, 2013 / No Comment / Read More
सामुहिक लगानीमा खानेपानी आयोजना
February 17, 2013 No Comment
- राप्ती समाचारदाता दाङ÷ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा राज्यको मुख ताक्ने प्रवृत्ती बढिरहेको समयमा दाङ बिकट गाविस पञ्चकुलेका स्थानीयवासीले भने लाखौं रकम संकलन गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका छन् । पञ्चकुले–२ कौशिलापुर स्थानीयले प्रतिपरिवार २८ देखि ३२ हजारसम्मको रकम संकलन गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका हुन् । हरेक वर्ष पानीको अभाव हँुदै गएपछि पञ्चकुलेका २१ घरपरिवारले सामुहिक लगानीमा खानेपानी […]
के हो कुष्ठरोग ?
जीउमा रातो, फुस्रो, छुँदा थाहा नहुने दाग छ ? यदि हो भने एकपटक छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुस् । दागसँगै तपाईको हातगोडाका स्नायु मोटो देखिन्छन्, हातगोडा झम्झमाउँछन् भने यो कुष्ठरोगको समेत लक्षण हुन सक्ने भएकाले समयमै सचेत हुनुस् । कुष्ठरोग उपचारले पूर्णनिको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार, मुलुकमा करिब ३० हजार व्यक्ति कुष्ठरोगका कारण अपांगतासँगै […]
न्याय दिने सेवा केन्द्र सहयोगको आशमा
- सन्तोष खनाल दाङ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र सामाजिक न्याय दिलाउन प्रत्येक इलाका क्षेत्रमा गठन भएका सेवा केन्द्र अनुरुप चैलाहीमा गठन भएको गाविसस्तरीय सेवा केन्द्र कतैबाट पनि सहयोग जुठ्न नसक्दा अलपत्र हुने अवस्थामा पुगेको छ । महिलाको सुरक्षा मानव अधिकारको रक्षा, घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुव्र्यहारबाट प्रभावित महिलाहरुका लागि गठन गरिएको चौलाहीको गाविसस्तरीय सेवा केन्द्र […]
कोइलाको अभावमा संकटमा लुहार पेशा
- राप्ती समाचारदाता दाङ,जीवनका तीनदशक भयो पश्चिम दाङको श्रीगाउँका धनीराम विकले लुहार पेशा अंगालेको । उहाँलाई हाल एउटै विषयले पिरोल्ने गरेको छ, त्यो हो सामुदायिक वनले औजार निर्माणका लागि कोइला दिदैन कि भन्ने ? पहिले सहजरुपमा सामुदायिक वनले कोइला सहजरुपमा दिने गर्दथे, तर हाल सामुदायिक कोइला नै नदिने भएपछि उहाँ समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । हाल […]
काठमाडौं । प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाल यतिबेला अमेरिकातिर बरालिदै गरेको चर्चा काठमाडौँंमा छ । उनी काठमाडाँैं वा अमेरिका जहाँ भए पनि मिसिङ हेटौडा भन्दै दाहालले आफ्नो फेसबुक वालमार्फत् एमाओवादीको महाधिवेशनलाई शुभकामना दिएर चित्त बुझाउने कोसिस गरिरहेका थिए । किन बिग्रिस मङ्गले आफ्नै ढंगले भने झैं प्रचण्ड पुत्र दाहालको स्टाट्स्मा आएका कमेन्ट र त्यसमा दाहालले दिएका प्रतिउत्तरले एमाओवादीप्रति हेरिएको […]
सिमेण्टको धुलो र गाउँको जीवन
- के.वि. मसाल दाङको अहिलेको समस्या भनेको प्रदुषण नै हो । किनकि यहाँ सिमेन्ट कारखाना खुल्दै गएका छन् । यो खोल्ने बेलामा स्थानीय मानिसहरुसँंग वृहत छलफलविना नै राजनैतिक बलमा सिमेन्ट उद्योगको अनुमति लिएका छन् । बेला वखत स्थानीय जनताले विरोध जनाए पनि यसको सुनाई भने आजसम्म हुनसकेको छैन । यस कुरालाई लिएर बेलाबखत सञ्चार माध्यममा समाचार बनेपनि लउद्योगपतिले सुन्ने […]
हजारौंको जनसागरका बीच दाङ महोत्सवको उद्घाटन
राप्ती समाचारदाता दाङ | बहुउद्देश्यीय सभा गृह निर्माण गर्ने उद्देश्यले दाङको घोराहीमा सञ्चालित दाङ व्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सवको हजारौं जनसागरका बीच आइतबार उद्घाटन गरिएको छ । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा आयोजित महोत्सवको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरज वैद्यले गर्नुभएको छ । संघका जिल्ला अध्यक्ष मधुसुदन बैद्यको अध्यक्षता एवं महासंघका बरिष्ठ उपाध्याक्ष भास्कराज […]
महोत्सवको आकर्षण : अल्लोदेखी च्याउ र केराको मःमः सम्म
- देविका घर्ती मगर दाङ व्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सव एवं मध्यपश्चिम औद्योगिक कृषि मेला आइतबारबाट शुरु भएको छ । महोत्सव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज बैद्यले औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ । दाङमा भव्य सभागृह निर्माण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महोत्सवलाई विविधिकरण गर्ने उद्देश्यलअनुरुप मेलामा विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरु राखिएको छ । मेलाका लागि राखिएका २ सय ३५ […]
घोराहीमा बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभाहल निर्माण गर्ने उद्देश्यले हिंजोबाट पर्यटन महोत्सव भइरहेको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि यस प्रकारका महोत्सवहरु फलदायी हुने गरेका छन् । यस हिसाबले दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भइरहेको यस पटकको महोत्सव पनि फलदायी हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । कुनै पनि विषयलाई उद्देश्य मुलुक बनाउन सकेको खण्डमा त्यसको सफलता त्यति नै प्रतिशत […]